War Hadda Naga Soo Gaaray Villa Somaliya,Farmaajo.kheyre iyo Jawaari oo Hal Arrin isku heysta.. | Nabadqaad Online
War Hadda Naga Soo Gaaray Villa Somaliya,Farmaajo.kheyre iyo Jawaari oo Hal Arrin isku heysta..
Illo xog ogaal ah oo ku dhow saddaxda Masuul ee ugu sareya Dalka ayaa sheegaya in khilaaf xoogan uu saacadihii ugu dambeyay hareeyay Madaxweynaha Soomaaliya R/wasaaraha Dalka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Seddaxda Masuul ayaa caqabada ugu weyn ee dhalisay Khilaafkooda waxaa uu yahay Qeybsiga Golaha Wasiirada cusub ee la soo xulayo oo midkastaa uu wato shaqsi u dhow.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la ogaaday in shaqsiyaadka ugu badan uu wato isagaoo golahan ka soo dhex muuqan doona sido kale waxaa uu diidan yaha in xukuumada la tirayareeyo isagoona diidan in xukuumada ka soo dhax muuqadaan shaqsiyaad Musuq ku eedeysan
Guddoomiye Jawaari ayaa arrintan ka soo horjeestay kana dalbaday Madaxweynaha iyo R/wasaaraha in la khafiifiyo shuruuda shaqsiyaadka xukuumada ka mid noqonaya waxaana uu jawaari wataa shaqsi xukuumadii hore ka tirsana oo Musuq lagu eedeeynayo.
Dhinaca kale R/wasaare Kheyre ayaa diiday xalay Liis ay ku qoran yihiin Magacyada xubno ka soo jeeda Beesha Hawiye isagoona sheegay in loo madax baneeyo shaqsiyaadka uu ka dhax xulanayo beesh auu ka soo jeedo ee Hawiye kana mid noqonaya xukuumada.
Hardanka Siyaasadeed ee u dhaxeeya Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan & Gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa cirka kusii shareeray waxaana ay isku haystaan xubnaha Digil & Mirifle ee golahan ku biiraya.